नवराज विकसंगै सुष्माको घर पुगेका युवकको यस्तो भनाई आयो ? बेपत्ता गोबिन्दको आमा र युवकले खोले यस्तो र''हस्य(भिडियो) - Filmy News Portal Of Nepal
नवराज विकसंगै सुष्माको घर पुगेका युवकको यस्तो भनाई आयो ? बेपत्ता गोबिन्दको आमा र युवकले खोले यस्तो र”हस्य(भिडियो)
रुकुम घटनाका सम्बन्धमा केही नयाँ कुरा खुल्दै आएका छन् । नवराज विकसंग उनको प्रेमिका भनिएकी युवतीलाई लिन संगै गएका उनका साथीले केही नयाँ कुरा खुलाएका छन् । त्यो दिन नवराज र ति युवतीको फोनमा कुरा भयो । फोनमा के कुरा भयो भन्ने ति साथीले थाहा त पाएनन् ।
तर, नवराजले फोनमा कुरा सकिएपछि साथीलाई भने, वेहुली राजी भई ल लिन जाउँ भनेर भने । साथीले त्यती भनेपछि अरु साथीले केही पनि सोधेनन् । गाउँवाट सुरुमा ६ जना युवतीको गाउँतिर हिँडे । भेरीको पुलमा पुगेपछि अरु १६ जना थपिए ।
त्यसपछि फेरी ३ जना थपिएपछि २१ जनाको टोली भएर युवतीको गाउँमा गए । यस अघि नवराजले युवतीलाई आफु कथित ठूलो जातको भनेर भनेको कुरा पनि ति साथीले खुलाएका छन् । सुरुमा आफुलाई अर्कै जातको भनेर युवतीलाई भनेको थियो । तर पछि कुरा खुेलेको हो । यस अघि पनि गाउँमा त्यसैगरी युवतीलाई लिन जाँदा स्थानियले प्रहरीकहाँ बुझाएका थिए ।
उनले भने, प्रहरीकहाँ बुझाउन लगेपछि नवराजले अब फेरी आउँदा अरुलाई पनि लिएर आउँछु र युवतीलाई उठाएर लैजान्छु भनेर चेतावनी दिएका थिए । नवराजकै साथी भन्छन्, २१ जना भएर जाँदा त्यो गाउँका मानिसले त्यही चेतावनी सम्झिएको हुनुपर्छ । उनीहरु युवतीको घर नजिकै पुगेपछि युवतीको आमाले तिमीहरु फेरी आयौ ? अस्तिनै प्रहरीकहाँ बुझाएको विर्सिसक्यौ भनेर भनेको उनले बताएका छन् ।
उनले त्यतीबेला जातिय अपहेलना हुने शब्द पनि प्रयोग गरेको ति साथीले बताएका छन् । सञ्चार माध्यममा विभिन्न कुरा वाहिर आएका छन् । मिडियामा आएका केही कुरा भने वास्तविकता भन्दा बढी आएको पनि बताइएको छ । १८ वर्षको जवान छोराको पर्खाइमा रहेकी गोविन्द शाहीको आमाले निकै ठूलो पीडा भोगेको बताएकी छन् । गोविन्द अहिले सम्म फेला परेका छैनन् । श्रीमानवाट पनि माया नपाएकी उनले छोराको मुख हेरेर बसेको बताइन् ।
उनले साथीहरु घरमा आउँदा पनि यस्तो लकडाउनको बेलामा कोही नआउ भन्ने गरेको बताइन् । उनले यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउने भए छोराको साथीालाई युवती तिर आशक्त हुन नदिने बताएकी छन् । एसइइ दिने तयारीमा रहेका उनका छोरा १२ वजे दिउसो काफल खान भनेर घरवाट निस्केको बताइन् । उनी पनि काममा गएकी थिइन् ।